नेपाली बसेका ठाउँमा नगद काउण्टरसहितको शाखा खोल्दै युनिमनी Bizshala -
शिवम र युनिभर्सलको मूल्यमा लगातार नेगेटिभ सर्किट !
नेपाली कामदार जापान लैजाने बाटो खुल्यो: मासिक तलब रु. ३ लाखसम्म हुने
दवाब समूहद्वारा नेप्से गेटमा कालो बेलुन उडाएर अनिश्चितकालीन रिले अनसनको सुरुवात
नेपाली बसेका ठाउँमा नगद काउण्टरसहितको शाखा खोल्दै युनिमनी
काठमाण्डौ । विश्वव्यापी एक्सचेन्ज तथा रेमिट्यान्स कम्पनी युनिमनीले नेपालीको बाक्लो उपस्थिति रहेका जापानका सबै ठाउँमा शाखा खोल्ने भएको छ ।
नेपालीको बाक्लो उपस्थिति रहेका ठाउँमा नगद काउन्टरसहितका शाखा खोल्ने योजना रहेको कम्पनीको नेपाल हेर्ने कर्मचारी जगदिश खनालले बताए ।
जापानका विभिन्न कलेजमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई सहज होस् भनेर कम्पनीले नगद काउन्टरसहित शाखा खोल्न लागेको उनको भनाई छ । कम्पनीले नयाँ ग्राहकको पहिलो कारोबार निःशुल्क गर्दै आएको छ । यो स्किम डिसेम्बरसम्म कायम रहने कम्पनीको भनाइ छ ।
ग्राहकलाई सुविधा होस् भनेर अनलाइनबाटै सदस्य बन्न सकिने व्यवस्था पनि कम्पनीले मिलाएको छ ।
युनिमनीले नेपालमा रेमिट्यान्स कारोबारमा ख्याति कमाएको आइएमई समूहद्वारा प्रवद्र्धित ग्लोबल आइएमई, हिमालयन, प्रभु, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट जस्ता ठूला बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीहरुसँग साझेदारी गरी जापानमा कार्यरत नेपालीले कमाएको पैसा सुरक्षित रुपमा उनीहरुका आफन्तको हातमा पुर्याउँदै आएको छ । ग्लोबल आइएमई र हिमालयन बैंकमा खाता हुने ग्राहकको खातामा १ घण्टाभित्रै रकम जम्मा हुने कम्पनीको भनाई छ ।
कम्पनीले नेपाली ग्राहकलाई पैसा होल्ड गर्ने सुविधा समेत दिएको छ । यो सुविधा अन्तर्गत ग्राहकले कम्पनीलाई बुझाएको रकम जुन दिनको विनिमय दर उच्च छ, सोही अनुसार हिसाब गरेर आफन्तलाई पठाउन सक्छन् ।
युनिमनी जापानबाट नेपाल पठाएको रकम एक्सप्रेस मनी, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, हिमालयन बैंक र यी बैंकका एजेण्टमार्फत जुनसुकै ठाउँबाट भुक्तानी लिन सकिने बताइएको छ ।
जापानबाट पठाएको रकम नेपालमा आफूले चाहेको जुनसुकै बैंक खातामा डिपोजिट गर्न पनि सकिन्छ,’ खनाल भन्छन्, ग्लोबल आइएमई र हिमालयन
बैंकमा खाता हुने ग्राहकको खातामा १ घण्टाभित्रै रकम जम्मा हुन्छ ।’
दुबईमा मुख्यालय रहेको युनिमनी भुक्तानी, विनिमय र रकम स्थानान्तरण सेवा (रेमिट्यान्स) दिने बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो । संसारका २५ मुलुकमा युनिमनीको सञ्जाल छ । युनिमनीमा नौ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । युनिमनीको
मातृसंस्था युएई एक्सचेन्ज हो ।
जापानमा छरिएर रहेका नेपालीको सुविधाको लागि कम्पनीले नेपालीहरु रहेका ठाउँमा थप शाखा विस्तार गर्न लागेको खनालले जानकारी दिए ।
साञ्जेनलाई रु. ५४.७५ करोडको आइपीओ निश्कासन अनुमति
सेबोनको पक्षपात: त्रिशुलीलाई २ दिनमै आइपीओ स्वीकृति, रसुवागढीलाई साढे ३ महिना !
शिवमको मूल्यमा पहिरो: बिक्री गर्न चाहनेको लहर, किन्ने छैनन्
‘सम्भ्रान्त र शहरिया बिमाको कुरा गर्नै चाहदैनन् !’
जापानले नेपाली कामदार लैजान सम्झौता हुँदै, भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुनेले मात्र जान पाउने
संखुवासभाको खाँदबारी र उदयपुरको गाइघाटमा प्रभू बैंक
काठमाण्डौ । प्रभु बैंक लिमिटेडले संखुवासभा जिल्लाको खाँदबारी...
महालक्ष्मी बैंकका शाखाबाट एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेवा पाइने
काठमाण्डौ । महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स...
सगरमाथाका बिमा पोलिसी कामना सेवाका शाखाबाट पाइने
काठमाण्डौ । कामना सेवा बिकास बैंक र सगरमाथा इन्स्योरेन्सबीच...
एनआइसी एशिया क्यापिटलमा नयाँ सीइओ
काठमाण्डौ । एनआइसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी...
बुटवलको बेलबासमा एनआइसी एशिया बैंकको शाखा
काठमाण्डौ । एनआइसी एशिया बैंक लिमीटेडले रुपन्देहीको बुटवलस्थित...
हिमालयन बैंकले रु. ३ अर्बको ऋणपत्र निश्कासन गर्ने, ब्याज
काठमाण्डौ । हिमालयन बैंकले तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी...
एसबीआईका ग्राहकलाई अलर्ट–यी चार गल्ती नगर्नू, खालि हुनसक्छ
काठमाण्डौ । भारतको सबैभन्दा ठूलो बैंक स्टेट बैंक अफ इण्ड...
जंगल क्रिकेट कर्पोरेट टुर्नामेण्टमा एनआइसी एशिया विजयी
काठमाण्डौ । विश्वासिलो, आधुनिक र सहज बैंकिङ सेवा प्रदान गरेर आम...